Dowlada Somalia oo wada hadal kula jirta Kenya sidii dib loogu celin lahaa Qaxooti Somali ah - Wargeyska Faafiye
Danjiraha u Jooga dalka Kenya Maxamed Cali Nuur Americo ayaa beeniyay in dowlada Somalia ay qaadacday kulamo isdaba joog ah oo looga doodayay dib u celinta qaxootiga Soomaalida dalkaasi Kenya ku nool, waxa uu yiri “waan la soconay dhamaan kulamadaasi”.
Kenya ayaa ku andacootay in Somalia aysan ka qeyb galin kulanka 3-da gudi ee loo saraay dib u celinta Soomaalida Kenya, hadalkaasi ayaa safiirka waxa uu sheegay isagoo howlo Caafimaad u jooga dalka Canada.
Warbixintaan ayaa waxaa lagu daabacay Jariidada the Star ee kasoo baxda dalka Kenya.
Americo ayaa sheegay in goobaha la doonayo in qaxootiga lagu celiyo ay tahay weli kuwo aan Amni aheyn oo ay welwel ka qabaan, Hey’adda QM Arimaha Qaxootiga ayaa sheegtay in ay hor u socod lahayd arimaha dib u celinta balse hada xoogaa gaabis uu jiro.
Bar malyuun dad Soomaali ah ayaa ku jira xeryaha qaxootiga dalkaasi Kenya, kuwaa oo hadii ay Dowladaha Somalia iyo Kenya oo ay la Jirto UNHCR isku afgartaan lagu soo Celinayo Soomaaliya.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsContact Faafiye.comSoomaliya Iyo Qadar oo Heshiisyo Kala Saxiixday.Xildhibaan lagu dilay MuqdishoGabar Isdaldashay markii Sawirkeeda lagu soo bandhigay Facebook -ga.Madaxweynaha Nigeria oo ka shifay hantidiisa.